अस्ति किन आएनन् ? भोली किन आउँदैछन् चिनिया प्रधानमन्त्री ? « paniphoto
« अनौठो संस्कार उमेर पुगेपछि सबैलाई विहे गर्न हतार हुँदोरहेछ ! »	अस्ति किन आएनन् ? भोली किन आउँदैछन् चिनिया प्रधानमन्त्री ?
By -पानीफोटो- on Friday January 13, 2012	पहिले ठुलै हल्लाखल्ला भाथ्यो । चिनिया प्रधानमन्त्री नेपाल आउँने भएपछि के के न हुन्छ भने झै गरेर प्रचारप्रसार गरियो । कसैले नेपालमा अब युआन बर्षिने भो भनेर लख काटे । कसैले भारत गर्जिने भो भनेर अड्कल लगाए । कतिले बाबुराम भट्टराईको शिरमा हात राख्नलाई मात्र चिनिया प्रधानमन्त्री नेपाल आउँन लागेका हुन् सम्म भने । तालमा ताल मिलाउँदै सरकारका मन्त्रीहरु पनि खुब धमास लगाईरहेका भेटिन थाले । तर भयो के ? चिनिया प्रधानमन्त्री आएनन् । हाम्रा लागि त केही ठुलो कुरा नै थिएन । आउँने भनेका चिनिया प्रधानमन्त्री आएनन् । के बिग्रियो ? तर कहाँ त्यस्तो भयो र ? दही मथे जत्तिकै कुरा मथिन थाल्यो । किन भ्रमण स्थगित गरे चिनिया प्रधानमन्त्री जियाबाओले ?, वेनको भ्रमण स्थगनको तरंग, बाबुरामलाई धक्का यस्ता धेरै शिर्षकहरु आउँन थाले । हो न हो पहाडै खसे जस्तो भो । एकैदिन अगाडीसम्म धमास पिटिरहेका मन्त्री नेताहरु भ्रमण भइहाल्ने टुंगो थिएन भन्न थाले । चिनिया प्रधानमन्त्री आएर के के न गर्देलान् र सरकारको साख बढ्ला भनेर खिस्रिक्क परेकाहरु दुई हात माथि उफ्रिए । तर किन चिनिया प्रम आएनन् भन्ने वास्तविकता हामीसम्म आइ नै पुगेन । खाली यस्तो रे वा यस्तो पो हुन सक्छ भन्ने मात्र बाहिर आए ।
तर आज एक्कासी समाचार बाहिरियो । भोली चिनिया प्रधानमन्त्री नेपाल आउँने । विहान ११ बजे त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्नु हुने बेन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न सिधै सिंहदरवार जाने रे । अस्ति चै नआएका चिनिया प्रधानमन्त्री भोली चै किन आउँदैछन् त ? सायद कारण यस्तो हो ।
सुरुमा अस्तिको कुरा । के भएको थियो ?चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ आउँने हल्लाले नेपाल तातेको थियो । गल्ली गल्ली अनि चिया पसलमा समेत हट इस्यु भएको थियो वेन जियाबाओको नेपाल भ्रमण । तर पुस ५ गतेबाट हुने भनिएको चिनियाँ प्रधानमन्त्री जियाबाओको नेपाल भ्रमण अन्तिममा आएर स्थगित भएको थियो । र, खासमा के भएको थियो भन्ने कुरा बाहिर नै आएन । चिनिया स्रोतबाट आन्तरिक कारण मात्र भनियो । नेपालमा अनेक अड्कलहरु काटिए । तर अहिले बुझ्दा वास्तविकता यस्तो हो सायद ।नेपालमा चिनिया बिरोधीहरु केही बढी सक्रिय भईरहेका छन् । यो वास्तविकता चिनिया पक्षबाट लुकेको छैन । यस्तो स्थितीमा अस्ति जुन हल्ला मच्चाए त्यसमा चिनिया बिरोधीहरुलाई चिनिया प्रधानमन्त्रीको बिरोधमा प्रदर्शन गर्न राम्रो तयारी गर्ने समय मिलेको थियो । सानो बिरोध प्रदर्शनको सामना पनि चिनिया पक्षको लागि भारी सावित हुन सक्थ्यो । अन्तराष्ट्रियरुपमा यस्ता प्रदर्शनले चिनलाई पक्कै पनि अफ्ठ्यारोमा पार्न सक्ने बुझेर नै चिनिया प्रधानमन्त्री नेपाल नआएका हुन सक्छन् । यसैले त यो पाली गुपचुपमा उनी नेपाल आउँन लागेका हुन् । र, नेपाल सरकार सकेसम्म यसलाई गोप्य राख्न चाहिरहेको छ ।
के गर्लान् नेपाल आएर वेन जियाबाओले ?छिमेकीहरु मध्येमा सस्तैमा समर्थन पाएको मुलुक भनेको नेपाल हो चिनका लागि । भारतको हस्तक्षेपकारी भुमिका भएपनि नेपालमा चिनको कुरा पनि उत्तिकै बिक्ने गर्छ । यसैले चिन नेपालमा अझ आफ्नो भुमिका बढाउँन चाहन्छ । यसका लागि उसले नेपालमा केही लगानी पक्कै गर्नेछ । बेन जियाबाओले नेपालमा सडक विस्तारका बाहेक पोखरामा विमानस्थल निर्माण गर्न तथा काभ्रेपलाञ्चोकमा सुख्खा बन्दरगाहा बनाउँने बिषयमा र केही जलविद्युतमा लगानी गर्ने बिषयमा छलफल चल्न सक्छ । स्मरण रहोस् चीन विश्वका विकासोन्मुख तथा अविकसित देशहरुका लागि विश्व बैंक भन्दा ठुलो दाता हो ।
« अनौठो संस्कार उमेर पुगेपछि सबैलाई विहे गर्न हतार हुँदोरहेछ ! »	8 comments to अस्ति किन आएनन् ? भोली किन आउँदैछन् चिनिया प्रधानमन्त्री ?
· जवाफ दिनुहोस्	हन ! के कुरा गरेको ? चिनका पो प्रधानमन्त्री हुन् त जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला आउँछन् ।
· जवाफ दिनुहोस्	तपाईले भनेको कुरामा मेरो सहमति छ । हल्ला बढी भएरै नआएका हुन् पहिले ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	प्रल्हाद विक
· जवाफ दिनुहोस्	नेपालमा चिनिया बिरोधीहरु केही बढी सक्रिय भईरहेका छन् । यो वास्तविकता चिनिया पक्षबाट लुकेको छैन । यस्तो स्थितीमा अस्ति जुन हल्ला मच्चाए त्यसमा चिनिया बिरोधीहरुलाई चिनिया प्रधानमन्त्रीको बिरोधमा प्रदर्शन गर्न राम्रो तयारी गर्ने समय मिलेको थियो । सानो बिरोध प्रदर्शनको सामना पनि चिनिया पक्षको लागि भारी सावित हुन सक्थ्यो । अन्तराष्ट्रियरुपमा यस्ता प्रदर्शनले चिनलाई पक्कै पनि अफ्ठ्यारोमा पार्न सक्ने बुझेर नै चिनिया प्रधानमन्त्री नेपाल नआएका हुन सक्छन् । यसैले त यो पाली गुपचुपमा उनी नेपाल आउँन लागेका हुन् ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	मनीता पण्डित
· जवाफ दिनुहोस्	ठुला देशका ठुलै कुरा ।
यही Category बाटलाज पचेपछि ….विधेयकमा आममाफी दिइने भनेर लेखेको तपाई आफुले नै पढेको हो ?माओवादी-मधेसीले घ्याम्पे हान्दै गरेको फोटो सार्वजनिकसंविधानसभा निर्वाचन २०७० नतिजा लाइभ अपडेटलाज पचेको, लबस्तरो !!विल ओरेलीलाई खुला पत्र – सुदर्शन सुवेदी ‘त्यो नेपाली मान्छे’ मात्र होइनन्अनि छापियो मुलधारका मिडियामा बेलबारी घटनाको खबर !पास हुनेलाई बधाई, फेल हुनेले हिम्मत नहारौँबिचरा, नेपाली क्रिकेट टोली ! के पारा हो क्यानको ?९/११ को आक्रमणपछि पहिलो पटक अमेरिकामा बम आक्रमण, कम्तिमा २ को मृत्युOnline Users3 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार